Nagu saabsan - Nanchang Vision Dharka Co., Ltd.
Ku soo dhowow barnaamijka 'Vision'
Nanchang Vision Dharka Co., Ltd. wuxuu ku yaal magaalada Nanchang, gobolka Jiangxi, Shiinaha. Nanchang waxay caan ku tahay dharka casriga ee gudaha iyo dibedda, iyada oo si isdaba joog ah loo siiyay 'Magaalada Shiinaha ee caanka ah Knitwear', 'Dharka Dharka Qaranka ee Nakhshadda Naqshadeynta Pilot Park', 'Qaybta Duulista Gobollada ee Fiirinta iyo Casriyaynta Warshadaha Dhaqanka' iyo dhowr cinwaanno sharaf ah .
Waxaan leenahay warshad iskaashi wadaag ah iyo warshad daabacaad, oo leh ku dhowaad 10 sano oo waayo-aragnimo ah si aan uga caawino macaamiisheenna baahiyahooda astaanta dharka ah, iyagoo siinaya daabacaad caado ah, sumadaynta astaanta astaanta, daabacaadda wareejinta kuleylka, sublimation iyo daabacaadda shaashadda xariirta.
Waxaan ku takhasusay dharka tolida ah sida shaati, funaanad polo, hoody, haanta dusha sare, pant ect., Sidoo kale waxaan siineynaa dharka agabyada sida koofiyada, boorsada iyo bilado, sharaabaadyo hadiyado, dallacsiin iyo munaasabadaha banaanka. Tayadu waa dhaqankeenna, sidoo kale waa mudnaanteenna. Waxaan had iyo jeer ku adkaysanahay mabda'a ah "Macaamiisha Koowaad, Ta ugu Horeysa Tayo". Shirkadeenu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo QC ah si loo hubiyo in alaabtayada tayada ugu fiican ka hor maraakiibta dhoofinta iyo wax soo saarka ay sameyn karaan tayo fiican waqti gaaban. Sidoo kale waxaan haynaa koox naqshadeysan oo khubaro ah, waxay kaa caawin karaan inaad sawirato sawir saameyn leh sida aad male u tahay. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad si xor ah maskaxdaada u siiso, waxaan halkan u joognaa inaan run ka dhabeyno.
Ma rabtaa inaad xirato dhar shakhsi ahaaneed oo leh fikraddaada? Ma rabtaa inaad sameysato dhar kuu gaar ah? Ma rabtaa inaad noqoto mid gaar ah oo cusub? Hadday sidaas tahay, waxaad riixi kartaa meesha saxda ah ee hoose si aad u hesho! Ku soo dhowow degelkeenna.